Ciidamada amniga Soomaaliland oo qabtay gacan ku dhiigle laba bilood lagu raadjoogay - Jazeera FM
Ciidamada amniga Soomaaliland oo qabtay gacan ku dhiigle laba bilood lagu raadjoogay
June 4, 2017 admin featured
Ciidamada amniga Somaliland ayaa sheegay in ay soo qabteen gacan ku dhiigle Xamse Xariir Maxamed oo bishii April ee sanadkan magaaladda Burco ku dilay marxuum Marsal Cabdilaahi Geelle.
Shir jaraa’id oo ay si wada jir ah u qabteen Taliye ku xigeenka ciidamada booliiska Gashaanle sare Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo Taliyaha hawlgalinta ciidamada Cabdiqani Ciise Maygaag Gannay ayaa sheegay in ay magaladda Hargeysa ku sooo qabteen gacan ku dhiiglaha oo muddoba lagu raad joogay, isag oo ku dhuumaaleysanayay magaaladda.
“Kulankan waxaan iskugu nimid inaanu laba arrimood kaga hadalno, mid waa gacan ku dhiigle Xamse Xariir Maxamed oo bishii April 27 keeddii ku dilay magaaladda Burco Marxuun la odhan jiray Mursal Cabdilaahi Geele oo aan hawlgal ku soo qabanay isagoo ku dhuumanaya guri ku yaala xaafadda Axmed Dhagax ee magaaladda Hargeysa”ayuu yiri taliye ku xigeenka booliska Fooxle.
Sidoo kale, waxaa uu taliye ku xigeenku sheegay inay gacan bir ah ku qaban doonaan dadka biyaha ka soo dhaamiya dooxyadda iyo goobaha aan loogu tallogalay, isla markaana ciidamo gayn doonaan soo kormeeraha goobaha biyaha aan nadiifta ahayn ku jiraan, isagoo arrintaasi ka hadlaya waxaa uu yiri “,qodobka labaad waxay tahay fariintii wasiirka caafimaadka ee ahaa in booyadaha iyo damiirleyaashu ka soo dhaamin Karin dooxyadda, iyo ceelasha magaaladda”.
← Horumarka Bulshada
Dhimashada weerarkii London oo korodhay →